Incwadi yokuHlola yokuKhuphela kweeRadio - Geofumed
incwadi Free Remote axakekile
NgoJulayi, 2012 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS, intloko
Ikhompyutheni ye-PDF yolu xwebhu ifumaneka ukukhuphela Ukujonga i-Satellites ekude ukuLawula iindawo. Igalelo elixabisekileyo nelikhoyo xa sibheka ukubaluleka kwesi siyalo esiye senziwa xa senza izigqibo zolawulo olufanelekileyo lweemahlathi, ezolimo, imithombo yendalo, imozulu, imidwebo kunye nokulawulwa kwendawo.
Ngokwedatha ekhishwe kwi-Union of Concerned Scientists http://www.ucsusa.org NgoFebruwari we-2012 kukho ngaphezu kwe-satellites ye-900 ejikeleza umhlaba, apho uninzi, malunga ne-60%, lunxibelelwano. Iipatethi ze-remote sensing zi malunga ne-120.
Lo mbhalo uquka umxholo wembali ongekho mfuneko, ekubeni ukunyuka kwexesha elidlulileyo kwiiminyaka ezidlulileyo kungasenza sikhohlwe ukuba ukuqala kwesi siyalo kwakunokuqala, nangona kunjalo kwakukho phambili kwi-teknoloji yesikhala. Namhlanje ubuchule bokubona kude (ukude kwinqanaba) kuluhlu olubanzi lweemifanekiso ezithathwe ngama-satellites amaninzi ajikeleza iplanethi, kodwa le ntlukwano efanayo iyadala ukudideka okufanayo ukuqonda ukufaneleka kwedatha.
Kule nto, ngokucacileyo le ncwadi igxininise ingqalelo yayo. Iquka isingeniso ekukude ukuqonda ukuzalisa iimfuno zoqeqesho kunye ne-glossary. Kodwa amandla alo mbhalo usele nkcazweni ngendlela yekhathalogi yecebo kunye nekhenkethi yeesetelliti ezikude ezisetyenziswayo eziphezulu kunye nezisisombululo eziqhelekileyo, kunye neeparitha ezisisiseko zokufumana imifanekiso ye-satellite. Inzame enkulu yokwenza i-homogenize umxholo ngokujonga ukuba ulwazi luhlala lubanzi kwaye lusasazeka. Akungabazeki ukuba kuya kunceda abo banomdla ukuba bazi ukusetyenziswa kwesilawuli kude ekuqeqesheni kwabo ngenxa yokuba ubuthathaka obukhulu bekungabikho kokusasazwa ngokuchanekileyo; oko eli phepha lifezekisa ngokuqinisekileyo.
Inkqubo yokukhetha i-satellites echazwe kwincwadi yayi:
Ukuba basebenza ngomhla wokulungiselela lo mpapasho. (NgoFebruwari we2012)
Ukuba banayo isisombululo sendawo esilingana okanye ngaphezulu kuneemitha ezili-30 / pixel malunga.
Ukuba iimveliso zabo zafumaneka ngeendlela ezithile ezilula zokuthengisa.
Uhlobo lwe-RADAR lwe-microwave sensors lishiywe kule khathalogu. Nangona ezi zinzuzo zokukwazi ukuqhuba phantse naziphi na izimo zeemeteorological (cloudiness, imvula elula, njl.), Ukucwangciswa nokuchazwa kwemifanekiso yabo kudinga indlela eyahluke kakhulu kwizinto ezichazwe kule ngxelo.
Kwaye nganye ngcaciso isishwankathelo kwifom yeefayile yezobugcisa njengoko kuchaziwe ngezantsi:
Intsimi yokuqala ibonisa igama le-sensor, elineemeti ezininzi ze-satellites, enye kuphela, ekhethiweyo ukubonisa igama le-satellite ngokwazo. Kwimeko yama-satellites eneenjini ezininzi, iibhokisi eziliqela zongezwa, enye yesenzi nganye.
Intsimi yesibini ibonisa isisombululo sendawo esinikwe ngumenzi. Oku kuyahluka ngohlobo lweembono ze-satellite, ukwenzela ukuba ubukhulu becala buboniswe kwinqanaba le-orbit (nadir). Kwimeko yama-satellites anesininzi ezininzi, isisombululo sesithuba ngasinye sichazwe.
Intsimi yesithathu ibonisa inani leenqumfa ezibonakalayo ezibonelelwa ngumenzi.
Iwesine ibonisa isisombululo sexesha le-sensor. Olu datha lungahambelani, kuba lo mpawu uhluka ngoxhomekeke kwinqanaba le-angle apho i-satelithi "iphoqelelwa" ukufumana umfanekiso. Ngoko ke idatha ebonakalayo ibonakalisa kwaye inenjongo yayo yokuba umfundi ufumana ingcamango yenkcazelo yexesha elifanelekileyo le-sateliti ukufaka indawo efanayo.
Yaye iyokugqibela ibonisa inani elincinane kwikhilomitha yekhilomitha yomfanekiso othunyelwe ngomhla wokulungiselela le khathalogu. Kukhethwe ukuba kufakwe olu lwazi ukuze umfundi abe neengcamango malunga noko kuya kuba neendleko zokufumana umfanekiso wendawo ethile. Ixabiso lokugqibela lixhomekeke kwiinkalo ezininzi (ukulinganisa ubungakanani, ubuncinci, ipesenti yexabiso elisezantsi, i-degree of image processing, izaphulelo ezinokwenzeka, njl.) Ngoko kuya kufuneka kube njalo ukuba uqhagamshelane nenkampani yomthengisi kwaye unqume ngqo uhlobo umkhiqizo ofunekayo ukuba wazi ixabiso elichanekileyo.
Ngokuqinisekileyo kufuneka ukhuphe umqulu, ufunde, ulondoloze ekuqoqweni kokufunda okuthandwayo nokuwabelana ngawo. Ndiyishwankathela isalathisi somxholo.
Izinto ezenziwe kwinkqubo yokude
I-electromagnetic spectrum ekude
Iimpawu zomlomo ezikhoyo kwiisetelliti ezikude
Isigqibo sesilawuli ezikude: i-Spatial, Spectral, Radiometric, Temporal
Iintlobo zeemifanekiso ezikude
UKUBHALWA KWEMHLABA-1 (EO-1)
I-TERRA (EOS-AM 1)
ABASEBENZI BEEPARAMETERS ABAFUNA ISICELO SATELLITE
Kubonakala ngathi ngumsebenzi ongabalulekanga, oza kuthi usuka kwiProjekti «Ukusetyenziswa kwemifanekiso ephezulu yesethelayithi kulawulo lwendawo ye-Macaronesian» (SATELMAC), Kwamkelwe kwi ubizo yokuqala Inkqubo Cooperation abekwa - Madeira Azores elikwiiCanary Islands (iTeknoloji-Mac) 2007-2013. Le projekthi isebenza Lead Partner loMlawuli Jikelele wezoLimo noPhuhliso lwasemaphandleni of the Ministry of Agriculture, Imfuyo, nokuLoba Namanzi of elikwiiCanary Islands, kwaye nabalingani Group of Earth olungenamiqathango Atmospheric Administration, University inxaxheba la Laguna (GOTA) kunye weNgingqi Institute of Planning Agrarian, Azores (IROA).
Baya ukuzibona ngetyala ngenxa kule nzame, kwaye Cartesia lokwabelana ikhonkco nge LinkedIn.
Khuphela umqulu kwikhonkco elandelayo:
Post edlulileyo«Edlulileyo I3Geo kunye nezixhobo ze 57 Brazilian Public Software
Post Next Yintoni eye yaba inguqulo ye AutoCAD?Okulandelayo "
Iimpendulo ze-4 kwi "Book Free Reensing Book"
Alberto Rubio Medina uthi:
Ndiyabulela kakhulu, ndicinga ukuba ligalelo elikhulu, ndiya kuqonda iincwadi ezintsha ezenzayo.
Ndiyabulela ... ndiza kuyibona